Ahoana ny fomba handefasana ny fandikan-tenyo amin'ny fandaniam-bola mba hahazoana tombony amin'ny Ecommerce Boom | Martech Zone
Ny ecommerce dia fironana nisondrotra tato anatin'ny folo taona lasa. Ary miaraka amin'ny areti-mandringana, betsaka ny olona miantsena amin'ny Internet noho ny hatramin'izay. Ny ecommerce dia manome ny fomba tonga lafatra hahatrarana demografika erak'izao tontolo izao avy eo aorian'ny komputer. Etsy ambany, hojerentsika ny maha-zava-dehibe ny fandikan-teny marketing serivisy sy ny fomba fampiasana azy ireo hanamafisana ny varotra eCommerce.
Maninona no mandoa fampiasana fandikan-teny momba ny varotra matihanina ho an'ny paikadim-barotra iraisam-pirenena
Ny fampiasana serivisy fandikan-teny momba ny varotra matihanina amin'ny hetsika eCommerce dia mety hahazo valisoa lehibe. Ofer Tirosh, tale jeneralin'ny mpanome tolotra fiteny Tomedes, dia manome toro-hevitra momba ny fitadiavana orinasa matihanina ary ananganana azy ao aminao paikady marketing iraisam-pirenena hanitatra:
Raha tsy miteny ny fitenin'ny firenena ianao dia mitadiava masoivoho mendrika hiara-miasa aminy - ary ataovy haingana izany! Ny fandraisana anjara amin'ny maso ivoho eo amin'ny sehatry ny varotra iraisam-pirenena hatramin'ny voalohany dia mety hisy fiovana lehibe amin'ny fahafahanao hahita fahombiazana. Na mikaroka fomba amam-panao eo an-toerana ianao, mitady fampahalalana momba ny teknikan'ny marketing ankafizina ao amin'ny tsenanao kendrena, na ny fampisehoana vaovao momba ny vokatrao, dia ilaina ny fananana olona eo an-tanana mahay miteny ilay fiteny. Mpandika teny mahomby izay mahazaka ny zava-drehetra manomboka amin'ny fampahalalana momba ny varotra ka hatrany amin'ny serivisy fandikana tranonkala dia mety ho lasa ampahany sarobidy aminao paikady marketing iraisam-pirenena.
Ofer Tirosh, CEO an'ny Tomedes
Azo antoka fa mipoaka ny ecommerce amin'ity taona ity, miaraka amin'ireo olona voatery miantsena an-tserasera rehefa akaiky na mampihatra ny halaviran-tsosialy. Amin'ny Q2 2020, ny varotra eCommerce any Etazonia, ohatra, nitsambikina hatramin'ny 16.1%, niakatra hatramin'ny 11.8% tamin'ny Q1.
Vakio hatrany raha hianatra mampiasa fandikan-teny marketing hanampy amin'ny fampiroboroboana ny asan'ny eCommerce anao.
Ahoana ny fomba hivarotana ny tranokalan'ny ecommerce anao amin'ny fandikana ny marketing
Fandikana marketing manarona karazana varotra nomerika maro izay afaka manampy anao hamoaka ny teny amin'ny demografika mety momba ny tranokalan'ny eCommerce. Amin'ny alalan'ny fandikan-teny marketing, azonao atao ny mahazo antoka fa ny ezaka ara-barotra nomerika manaraka ireto dia mampandeha ny olona hatrany amin'ny tranokalan'ny eCommerce. Inona avy ireo ohatra amin'ny fandikan-teny? Indrindra avy amin'ny sehatra nomerika, dia misy izy ireo:
Lahatsoratra navoakan'ny media sosialy
Doka nomerika, ao anatin'izany ny doka aseho sy ny doka media sosialy
Lahatsoratra momba ny varotra
Fandikana marketing afaka manampy amin'ny fandikana fitaovana marketing ho an'ny doka nentim-paharazana raha toa ka zavatra heverin'ny orinasanao fa mendrika hampiasa vola tahaka anao izany mifantoka amin'ny paikady marketing ezaka. Fandikana marketing mahazaka dokam-barotra pirinty, brochure, taratasy fivarotana, flyer, katalaogy ary maro hafa.
Ny marketing amin'ny atiny dia fomba iray hafa handefasana ny anao fandikan-teny marketing mandany amin'ny fipoahana eCommerce. Tsy mampiroborobo mivantana vokatra na serivisy manokana. Fa kosa, mamokatra atiny misy fampahalalana na mampiala voly ho an'ny demografika mifanaraka amin'izany. Ohatra, ny fivarotana eCommerce famatsiana biby dia mety hamoaka lahatsoratra bilaogy momba ny fomba tsara indrindra hampiofanana alika kely.
Ny marketing amin'ny atiny dia mitaona ny olona hiditra amin'ny marika ary miresaka amin'ireo mpanjifa mety amin'ny fomba izay manampy azy ireo. Ny marketing nentim-paharazana dia mitaky ny fividianan'ny olona, ​​izay turn-off iray amin'ireo mpampiasa internet ankehitriny. Ny marketing amin'ny atiny dia mety ho ampahany mafy amin'ny rehetra paikady marketing iraisam-pirenena.
Raha misafidy ny handeha amin'ny marketing amin'ny atiny ianao, ny serivisy fandikan-teny dia afaka mahazo antoka fa ny atiny manampy sy mampiala voly dia mitazona ny hafatra fototra ary mifanaraka amin'ny rafitra sy ny kolontsaina vaovao.
Fandikana marketing sy tranokala ecommerce anao
Fandikana marketing afaka manampy amin'ny tranokalan'ny eCommerce anao ihany koa. Hamarino tsara fa voadika ny tranokalanao arylocalisation dia ampahany lehibe amin'ny paikady fandraharahana iraisam-pirenena. Inona ny dikanteny ankapobeny? Ny fandikan-teny dia manome antoka fa mamaky teny amin'ny fiteny vaovao ilay lahatsoratra. Na izany aza, tena ilaina ihany koa ny fametrahana azy traikefa eCommerce. Localization afaka:
Hanavao ny marika sy ny endrika rehetra ao amin'ny tranokala, toy ny mariky ny vola, endrika adiresy ary nomeraon-telefaona
Hamarino tsara fa mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpanjifa eo an-toerana sy ny fiteny vaovao ny fisehona
Fanavaozana ny sary toa ny sary hifanaraka amin'ny fivoriamben'ny kolontsaina eo an-toerana
Ampio ny tranokala eCommerce hifanaraka amin'ny lalàna mifehy eo an-toerana toy ny lalàna momba ny fiainana manokana na ny filazana momba ny cookie
Tazomy ny votoatin'ny tranokala ho mora tohina ara-kolotsaina
Tsara fandikan-teny marketing ny serivisy dia afaka mitantana ny fandikan-teny, ny toerana misy azy ary koa ny transcreation. Afaka aseho izy io Nanjary mora ny fandikana sy ny fandikana ho an'ny atiny video ary afaka miantoka ny kopian'ny kopia rehetra mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpihaino kendrena.
Ireo antsipiriany rehetra ireo dia mitambatra mba hananganana tranokala eCommerce toa matihanina. Fahita ny mahita tranokala eCommerce izay adika ratsy na mbola manana mariky ny vola amin'ny endrika vahiny. Ireo singa kely ireo dia mahatonga ny tranokala ho sarotra ampiasaina ary hahatonga anao hanontany tena raha sendra tranokala scam ianao. Hamarino tsara fa traikefa mpanjifa eCommerce dia zavatra tsara ho an'ny mpanjifanao amin'ny fametrahana ny tranokala. Ny lokisialy dia ampahany lehibe amin'ny tsara indrindra paikady marketing iraisam-pirenena.
Ahoana no ahitanao serivisy fandikana teny mora azo
Aza hadino ny miantsena eo anelanelan'ny masoivohon'ny mpandika teny isan-karazany. Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny alàlan'ny fanontanianao manodidina ny tamba-jotra matihaninao na ny fikarohana amin'ny Internet.
Afaka mahita serivisy eo an-toerana ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana teny toa ny serivisy fandikan-teny eo akaikiko, serivisy fandikan-teny matihanina UK na maso ivoho mpandika teny London. Azonao atao koa ny mijery ny serivisy amin'ny fiteny ilainao, amin'ny fampiasana teny toa fandikan-teny marketing amin'ny Espaniôla, fandikan-teny marketing amin'ny teny sinoa, na fandikan-teny marketing amin'ny teny frantsay.
Hamarino tsara fa manomana lisitr'ireo fanontaniana isaky ny serivisy ianao. Ny fomba hamalian'ny fifandraisanao ireo fanontaniana ireo dia hilaza aminao fa manam-pahalalana izy ireo sy ny fomba maha olona azy ireo hifandraisana. Azonao atao ny manontany momba ny vidiny, ny fomba fitahirizan'izy ireo mba hijanonany amin'ny fe-potoana farany, inona ny mari-pahaizana momba ny mpandika teniny, ary inona ny zavatra niainany fandikan-teny marketing izany.
Tags: fandikan-teny ecommercevarotra iraisam-pirenenaecommerce iraisam-pirenenafanatontoloanafandikan-teny marketingfiteny marotomedestranscriptionfandikana transcriptionfandikan-tenyserivisy fandikan-teny